Dalka Mareykanka ayaa ah kan ugu badan ee hubka dhoofiya caalamka, wuxuuna sii dheereeyey ka horeyntiisa dalka Russia oo ah kan ku xiga.
Shantii sano ee u dhaxeysay 2015 ilaa 2019, dhoofinta hubka ee caalamka ayaa sare u kacday 5.5 boqolkiiba, marka loo eego 2010 ilaa 2014, sida uu sheegay Machadka daraasadda Nabadda Caalamka ee SIPRI, oo fadhigiisu yahay magaalada Stockholm.
“Guud ahaan dhoofinta hubka way sare kacday...dalalka hubka soo dhoosadana waxaa kordhay dalabka,” waxaa sidaas AFP u sheegay Pieter Wezeman, oo ah cilmi-baare sare oo ka tirsan machadka SIPRI.
Hubka laga soo dhoofiyo Mareykanka ayaa sare u kacay 23 boqolkiiba, taasi oo saamiga Mareykanka ku leeyahay dhoofinta hubka caalamka ka dhigtay 36 boqolkiiba.
Intii u dhaxeysay 2015 ilaa 2019, Mareykanka ayaa hub culus u dhoofiyey 96 dal oo caalamka ka mid ah.
Kala bar hubka Mareykanka dhoofiyey waxaa la gaarsiiyey dalalka Bariga Dhexe, ayada oo bar ka mid ahna loo dhoofiyey Sacuudi Carabiya, oo ah dalka ugu badan caalamka ee hubka soo iibsada
Hubka Sacuudiga soo iibsado ayaa sare u kacay 130 boqolkiiba intii u dhaxeysay 2015 illaa 2019, marka loo eego 2010 illaa 2014. Sacuudiga ayaa hadda la geeyaa 12 boqolkiiba dhammaan hubka caalamka ee la dhoofiyo.